Falanqayn ku saabsan cayaarta kama dambaysta ee Koobka Adduunka | Baligubadlemedia.com
Cayaaryahanka khadka dhexe uga dheela xulka Faransiiska Blaise Matuidi ayaa lagu wada inuu cayaaro galabta inkastoo dhawaan uu dhaawac uusoo gaaray kaddib markii ay isku dhaceen Eden Hazard xiliiggii ay la cayaareen xulka Belgium.
Ivan Perisic oo cayaaro xulka Croatia ayaa lagu soo warramaya inuu dhaawac yahay xilli dhawaan uu kasoo qayb geli waayay tabbabar ay samaynaayeen xulkiisa Croatia oo cayaarta kama dambaysta ah u soo gudbay.
Guddiga anshaxa u qaabilsan xiriirka kubadda cagta Adduunka ayaa u fasaxay Cayaaryahanka daafaca uga dheela xulka Croatia Domagoj Vida inuu ka qayb galo cayaarta kama dambaysta ah ee galabta dhacayso kaddib markii uu kasoo muuqday muuqaal uu ku leeyahay ‘waxay sharaf u sugnaatay Ukraine’, oraahdan waxaa isticmaala dadka kasoo horjeedo Ruushka.
Domagoj Vida wuxuu hadalkan sheegay xilligii ay dhammaatay cayaartii rubac dhammaadka oo ay Croatia rigoorayaal uga badisay Ruushka.
Xulka Croatia waxay si wayn u aaminsan yihiin cayaar wanaaga Captanka Luka Mudric.
Croatia markii ugu horreysay ayay soo gaartay caayarta kama dambaysta ee Koobka Adduunka, si xowli ah ayay ku socotaa cayaaraha.
Faransiiska waa dalkii lixaad ee gaara cayaarta kama dambaysta Koobka Adduunka in ka badan saddex jeer, islamarkaana uu xulkan dabagalayo xulalkii Jarmalka(8 jeer cayaarta kama dambaysta), Brazil iyoTalyaaniga(6Jeer) , Argentina(5 jeer) iyo Netherlands(3 jeer).
Haddii uu goolal dhaliyo galabta Kylian Mbappe oo dhanka weerarka uga cayaara xulka Faransiiska wuxuu noqonaya cayartooygii labaad ee ugu da’da yar ee dhaliyo goolal cayaarta kama dambaysta ah ee Koobka Adduunka.Wuxuuna hadda haystaa saddex gool.
Saddex kamid ah cayaartoyda daafaca uga dheela Faransiiska ayaa goolal dhaliyay Koobka Adduunka waxayna kala yihiin Benjamin Pavard, Raphael Varane iyo Samuel Umtiti.